Inona no Atao hoe Fitsanganana Amin’ny Maty? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Batak (Toba) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabuverdianu Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Luvale Malagasy Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Maya Mingrelian Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Silianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Avy amin’ilay teny grika hoe anastasis ilay teny nadika hoe “fitsanganan’ny maty”, ary midika hoe “miarina” na “mitsangana indray” izy io. Ho velona hoatran’ny teo aloha indray ny olona efa maty rehefa hatsangana.—1 Korintianina 15:12, 13.
Tsy misy teny hoe “fitsanganan’ny maty” ao amin’ny Soratra Hebreo, izay antsoin’ny olona hoe Testamenta Taloha. Na izany aza, dia misy fampianarana momba azy io ao. Hoy, ohatra, Andriamanitra tamin’i Hosea mpaminany: “Havotako amin’ny fangejan’ny Fasana izy ireo, ary halaiko avy any amin’ny fahafatesana.”—Hosea 13:14; Joba 14:13-15; Isaia 26:19; Daniela 12:2, 13.
Ho aiza ireo hatsangana amin’ny maty? Hatsangana mba hiaina any an-danitra ny olona sasany ka hiara-manjaka amin’i Kristy. (2 Korintianina 5:1; Apokalypsy 5:9, 10) Antsoin’ny Baiboly hoe “fitsanganana voalohany” na “fitsanganana amin’ny maty aloha kokoa” ny azy ireo. Matoa anefa lazaina hoe “voalohany” sy hoe “aloha kokoa” ny an’ireo hiaina any an-danitra, dia midika izany fa mbola hisy fitsanganana hafa aorian’izay. (Apokalypsy 20:6; Filipianina 3:11) Hiaina eto an-tany ireo hatsangana amin’ilay fitsanganana manaraka, ary betsaka lavitra noho ireo ho any an-danitra izy ireo.—Salamo 37:29.
Ahoana no hananganana azy ireo? Nomen’Andriamanitra hery hananganana ny maty i Jesosy. (Jaona 11:25) Hovelomin’i Jesosy indray ‘izay rehetra any am-pasana.’ Haverina aminy indray ny fitadidiany sy ny toetra maha izy azy teo aloha. (Jaona 5:28, 29) Ho lasa fanahy ireo hatsangana ho any an-danitra. Ireo hatsangana ho eto an-tany kosa hanana vatana nofo sy ra, izay salama tsara sy tsy misy kilema.—Isaia 33:24; 35:5, 6; 1 Korintianina 15:42-44, 50.
Iza no hatsangana? Milaza ny Baiboly fa “hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.” (Asan’ny Apostoly 24:15) Anisan’ny marina ny olona tsy nivadika, toa an-dry Noa sy Saraha ary Abrahama. (Genesisy 6:9; Hebreo 11:11; Jakoba 2:21) Ny tsy marina kosa dia ny olona tsy nanaraka ny fitsipik’Andriamanitra satria tsy afaka nianatra na nankatò an’izany.
Tsy hatsangana kosa ny olona tena ratsy fanahy tsy mety miova mihitsy. Ho faty mandrakizay izy ireny rehefa maty, fa tsy hatsangana intsony.—Matio 23:33; Hebreo 10:26, 27.
Rahoviana no hatsangana ny maty? Milaza ny Baiboly fa mandritra ny fanatrehan’i Kristy no hatsangana ireo hiaina any an-danitra. Efa tamin’ny 1914 i Jesosy no nanomboka nanatrika. (1 Korintianina 15:21-23) Mandritra ny Fanjakana Arivo Taona hitondran’i Jesosy Kristy kosa no hatsangana ireo hiaina eto an-tany. Hovana ho paradisa ny tany amin’izay.—Lioka 23:43; Apokalypsy 20:6, 12, 13.
Tena hatsangana tokoa ve ny maty? Miresaka olona sivy natsangana tamin’ny maty ny Baiboly. Tantaraina amin’ny an-tsipiriany ilay izy sady nisy vavolombelona nahita maso. (1 Mpanjaka 17:17-24; 2 Mpanjaka 4:32-37; 13:20, 21; Lioka 7:11-17; 8:40-56; Jaona 11:38-44; Asan’ny Apostoly 9:36-42; 20:7-12; 1 Korintianina 15:3-6) Tena miavaka ny nananganan’i Jesosy an’i Lazarosy. Efa efatra andro mantsy izy no maty, ary teo imasom-bahoaka no nananganan’i Jesosy azy. (Jaona 11:39, 42) Na ny olona tsy tia an’i Jesosy aza tsy nanda hoe tena natsangana i Lazarosy. Ny hany azon’izy ireo natao dia ny nanao tetika hamonoana an’i Jesosy sy Lazarosy.—Jaona 11:47, 53; 12:9-11.
Asehon’ny Baiboly fa mahavita manangana ny maty Andriamanitra sady maniry hanao an’izany. Manana fitadidiana tsy manam-petra izy ka tadidiny daholo ny mombamomba ny olona tsirairay, izay hatsangany. Hampiasa ny heriny lehibe izy amin’izany. (Joba 37:23; Matio 10:30; Lioka 20:37, 38) Vitan’Andriamanitra ny manangana ny maty ary tena maniry hanao an’izany izy. Hoy ny Baiboly: “Hiantso ianao, dia hamaly anao aho, satria haniry mafy hahita ny asan’ny tananao ianao.”—Joba 14:15.
Hevi-diso momba ny fitsanganana amin’ny maty
Hevi-diso: Atsangana ny olona sasany, dia ringanina avy hatrany avy eo.
Ny marina: Resahin’ny Baiboly aloha hoe “hatsangana ho amin’ny fanamelohana” izay “zatra nanao ratsy.” (Jaona 5:29) Tsy izay nataony tamin’izy mbola velona anefa no hanamelohana azy, fa izay hataony aorian’ny hananganana azy amin’ny maty. Hoy mantsy i Jesosy: ‘Handre ny feon’ny Zanak’Andriamanitra ny maty, ary ho velona izay nihaino.’ (Jaona 5:25) Ho voasoratra ao amin’ny “horonam-bokin’ny fiainana” ny anaran’izay “nihaino” na nankatò ny zavatra nianarany taorian’ny nananganana azy.—Apokalypsy 20:12, 13.
Hevi-diso: Iny vatan’ilay olona tamin’izy mbola velona iny mihitsy no hatsangana.
Ny marina: Potika ny vatan’ilay olona rehefa maty izy, ka lasa vovoka.—Mpitoriteny 3:19, 20.
Hizara Hizara Inona no Atao hoe Fitsanganana Amin’ny Maty?
ijwbq no. 77
Ny Anaran’iza no Misoratra ao Amin’ny “Bokin’ny Fiainana”?